14th FBE Resolution final
Bayda institute for burma democrati...
US-Myanmar military relations perse...
Myanmar: Bengali and Geopolitics by...
(၁၄) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ (Frankfurt, Germany)ရက်စွဲ။ ။ 16-17th Jan 2010၁။ နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တရားမ၀င် အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေကို အခြေခံ၍ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၎င်းနောက်ပိုင်းကာလများတွင် ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်ကြရန် ဆုံးဖြတ်သည်။၂။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်များ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည့်အချက်များကို နိုင်ငံတကာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား ပျက်ပြယ်ကြောင်း (Null & Void)ကြေငြာနိုင်ရေးအတွက် ဖိအားပေး ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်သည်။၃။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်း အစိုးရ (NCGUB) ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) အစရှိသည့် အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်လည်းကောင်း အခြားသော ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေကြသောနိုင်ငံအသီးသီးရှိ အဖွဲ့အစည်း အင်အားစုများနှင့်လည်းကောင်း ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လေးနက်စွာတိုက်တွနးကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။်၎။ နအဖ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရအား ယှဉ်ပြိုင်စိမ်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရအင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံသည့် ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် သဘောတူကြောင်းနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သားများနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။ 1 2.
၅။ စစ်အာဏာရှင်များအား နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး (International Criminal Court) တွင်တရားစွဲဆိုနိုင်ရေး ကိစ္စကို သဘောတူ ထောက်ခံ၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအားလိုအပ်သည့် ကူညီ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ (UNSC) မှမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပြစ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက်ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (FBE)မှ တောင်းဆိုကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ Crime Against Humanity ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ပြီးနောက်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရနေမှုများ အဆုံးသတ်စေရေး နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု (Ending Impunity Burma Campaign) ကိုဖော်ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်သည်။၇။ မြန်မာ့အမျိုးသားကွန်ဂရက် (Burma National Congress) ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးချက်များကို(၁၄)ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု (FBE) ညီလာခံမှ မှတ်တမ်းတင်အကြံပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။၈။ ပြင်ပအင်အားစုများ အနေဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၏ ထုတ်ပြန်ထားသောရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ထောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။၉။ ဥရောပ-မြန်မာရုံး (EBO) သည် ၎င်းရရှိသော EU Fund အချို့အား စစ်အာဏာရှင်၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကို အခြေခံပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်အရွေးခံမည့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့ကို EU ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကူအညီပေးသည့် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဤညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် အပိုဒ် (၁) နှင့် (၂) ပါ အခြေခံနှင့်မကိုက်ညီသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်၍လည်းကောင်းဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု (FBE)အနေဖြင့် ဥရောပ-မြန်မာရုံး (EBO)၏ လုပ်ရပ်ကိုဆန့်ကျင်၊ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။၁၀။ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU)သည် မြန်မာပြည်ထွက် ရေလုပ်ငန်းမှ ပို့ကုန်များကို ခွင့်ပြုမည်ဆိုခြင်းသည် လက်ရှိနအဖစစ်အစိုးရနှင့် အပေါင်းပါတို့အား သက်ဆိုးရှည်စေရန် ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှု (FBE)မှ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU)၏ လက်ရှိချမှတ်ထားသော (EU Common Position on Burma)23.
ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆက်လက်ထားရှိပြီး မြန်မာပြည်မှ တင်သွငးသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တင်သွင်းခွင့်ကိုဥရောပသမဂ္ဂ (EU)မှ ခွင့်မပြုပါရန် တောင်းဆိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။၁၁။ Euro-Burma Network (EBN)နှင့် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု (FBE)တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည့် ကိစ္စများအား (၁၄)ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု (FBE)၏သဘောထား ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကို ဦးနွယ်အောင်မှတဆင့် Euro-Burma Network (EBN)သို့ ဆက်လက်တင်ပြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။၁၂။ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု (FBE) ညီလာခံမှ ရှေ့လာမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အောက်ပါ အလုပ်အဖွဲ့ (Working Committee)မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ယင်းအလုပ်အဖွဲ့ (Working Committee)မှ Standing Committee ကိုအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။ အလုပ်အဖွဲ့ (Working Committee) ၁။ မင်းသိန်းဦး (ဒိန်းမတ်) ၂။ ဦးမြင့်ဝေ (ဒိန်းမတ်) ၃။ ဦးကျော်သွင် (နော်ဝေ) ၄။ ကိုသက်ထွန်းဦး (နော်ဝေ) ၅။ ကိုဌေးဇေယျာ (ဆွီဒင်) ၆။ မမြလေးတင် (ဆွီဒင်) ၇။ ဦးဥတ္တရ (ယူကေ) ၈။ Dr. ၀င်းနိုင် (ယူကေ) ၉။ Dr.တေဇ (ယူကေ) ၁၀။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ (ယူကေ) ၁၁။ Dr.ခင်ဝင်းနွယ် (ယူကေ) ၁၂။ ဦးမျိုးသိန်း(ယူကေ) ၁၃။ ဦးကျော်စွာ (ယူကေ)34.
၁၄။ Dr.ဇော်နိုင် (ယူကေ) ၁၅။ Dr.သန်းထိုက် (ပိုလန်) ၁၆။ ဦးသောင်းထွေး (နယ်သာလန်) ၁၇။ ကိုထွေး (ပြင်သစ်) ၁၈။ ကိုထင်ကျော် (ပြင်သစ်) ၁၉။ ဦးနွယ်အောင် (ဂျာမဏီ) ၂၀။ မန်းအောင်လွင် (ဂျာမဏီ) ၂၁။ ဦးဆန်နီအောင်သန်းဦး (ဂျာမဏီ) ၂၂။ ကိုလင်းအောင်သိုက် (ဂျာမဏီ) ၂၃။ ကိုဝေဇင်ဦး (ဂျာမဏီ)၁၃။ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအင်အားစုများက ပေးပို့သော အကြံပေးစာများကို မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။၁၄။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ South Bank University တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉-၂၀နေ့ ကျင်းပခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ၌ အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့သော ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသဘောတူအတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။၁၅။ ရှေ့လာမည့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု (FBE) ညီလာခံကို ပထမဦးစားပေးဆွီဒင်နိုင်ငံအားလည်းကောင်း၊ အကယ်၍ ဆွဒင်နိုင်ငံတွင် မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်ီလက်ခံ၊ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။The Forum of Burmese in Europe (F B E) representsanetwork of Burmesecommunities across Europe and is advocating for democracy, social justiceand human rights in Burma. The FBE strongly rejects the militarydictatorial rule in Burma and has been working closely together with thedemocratic forces around the world.4Recommended
US-Myanmar military relations persepective by Myo Yan Naung Thein
Self identification clarification